Ilanga elithambile elithambile, ulwandle olufudumele olunamanzi e-emerald, ulwandle olungenakuqondakalayo olwandle oluhamba kahle luhamba ngezinyawo ezinkulu nemikhumbi, ukugeza nokuzijabulisa ngokukhangayo kwamapaki amathathu amakhulu amanzi - konke lokhu kanye nezinye izinto eziningi zokudla zingadlalwa edolobheni elihle eduze kwaseBlack Sea, ogama lakhe linguGelendzhik.
"I-Golden Bay" - i-park enkulu kakhulu futhi enkulu kunazo zonke eYurophu
Ngo-2004, eGelendzhik eduze noLwandle Olumnyama, kwakhiwa i-aqua park - enkulu kunazo zonke eRussia kuphela, kodwa naseYurophu. Ngaphezu kwalokho, isikhungo sokuzijabulisa siphakathi kwezinkampani eziyisihlanu ezihlonishwa kakhulu eYurophu, okubangela ukukhanga nakakhulu kwezivakashi ezivela phesheya kulezi zifunda. Indawo ephelele yepaki yamanzi ayi-hektare ayi-15.
Ngaphambi kokuletha ipaki elikhulu kunazo zonke evulekile eYurophu, ake sibone ukuthi yini enye ngokuphathelene nokuzijabulisa eGelendzhik.
Enye yezindawo ezinhle kakhulu edolobheni laseYurophu elinamamitha angu-12 000 ubude yiyona ndawo ebaluleke kunayo yonke imikhosi eGelendzhik. Kunezindawo zokudla eziningi ezithakazelisayo kakhulu, imishayo ehlukahlukene kanye namathilomu.
Amapaki amaningi ahlanzekile, ama-alleys namapaki amakhulu amakhulu amathathu angabantu abadala nabantwana. Kungenzeka futhi ezintabeni, ukuba kudlule enye yezintambo ezintathu. Enye yemigwaqo eya entabeni idlula epaki ye-safari.
Isilinganiso esikhulu kunazo zonke eRussia Ferris wheel esisepaki "i-Admiral Vrungel", ububanzi bayo buyizingamamitha angu-80. Futhi e-aquarium - enkulu kunazo zonke eRussia aquariums nezakhamuzi ezihlukahlukene kakhulu kolwandle.
Amapaki amanzi alandelayo asebenza kuGelendzhik: "Behemoth", "i-Dolphin" ne "Golden Bay" enkulu. Lezi zinsuku azikho ezilinganayo kulo lonke elaseYurophu.
Indawo yase "Golden Bay"
Yini engayithokozisa izivakashi njengepaki elikhulu kunazo zonke eYurophu? I-Gelendzhik itholakala ogwini lolwandle olumnyama oluhle, lapho i-Golden Bay ikhona khona, yakhulelwa futhi yakhiwa ngesitayela esiyinkimbinkimbi ngokuxuba amasiko ahlukene avela e-eras ehlukene. Ukuhamba ngezinsimu, izivakashi zingadlula kuzo zonke izingxenye zepaki, ngaphandle kokuya emigwaqweni yangaphambilini.
Ingqikithi, ukugijima okungama-67 kwenkimbinkimbi ehlukahlukene kakhulu (kuze kufike ku-137 m), amachibi okubhukuda angu-17, ukukhangisa okuyishumi okuhlukene kanye nama-slide angu-44 (kuze kufike ku-25 m) lakhiwe lapha.
Yonke le misebenzi ezindaweni eziyinkimbinkimbi kangangokuthi azikho izinkinga zokulinda emigqeni ukuze ujabulele lokhu noma lokho kuvela.
Kukhona nesitolo esikhulu (izihlalo ezingu-700), i- cafe ehlobo kanye ne-pizzeria.
Ipaki enkulu kunazo zonke eYurophu inamakhono okukhangayo nezingane eziningi kakhulu. Kukhona idolobha elimangalisayo lezingane, indawo yokudlala enhle emagqumeni ahlukahlukene, ama-swings kanye ne-trampolines. Leli sayithi lenziwe ngendlela enqabeni yamandulo yasendulo, kanti okukhangayo kwamanzi kuklanyelwe izingane cishe noma yisiphi isicelo kanye nobudala.
Futhi kukhona ama-slides kuze kufike ku-1 imitha eliphezulu - ngisho nezingane ezincane kunazo zonke - nemithombo emihle. Kukhona izakhiwo ezingavamile, isibonelo, umkhumbi wezingcingo ezinezinyoni zamanzi nokunye okuningi, lapho izingane zijabulela khona ngokujabula okukhulu.
Ipaki elikhulu kunazo zonke elingaphakathi kwamanzi eYurophu
Ipaki yamanzi yaseYurophu enkulu kunazo zonke enegama elihle "Iziqhingi ZaseTropical" (IziTropical Islands). Itholakala enyakatho-mpumalanga yeJalimane (eBrandenburg). Akukhona nje kuphela eYurophu, kodwa nasemhlabeni, lokhu kuyinkimbinkimbi enkulu kakhulu ngobukhulu bayo.
Yonke le mangaliso enkulu ihlelwe ekwakheni isisekelo sezempi esishiyiwe. Lesi sakhiwo - igumbi le-hangar, okwakungaphambili yokupaka izimoto zokuhamba ngezinyawo - liye laphenduka isikhungo sezokuzijabulisa nesimanje sezemidlalo emanzini. Ubukhulu bensimu yizinkundla ezingu-8 zebhola.
I-aquapark enkulu kunazo zonke eYurophu (ehlanganisiwe) iyinhlangano enhle kakhulu ye-oasis eshisayo enezintende zezandla, ama-lianas, ama-huts awakhiwe ngamanzi nezindawo zokubhukuda. Ubude bayo buyizingamamitha angu-360, futhi ububanzi buyizingamamitha angu-210.
Insimu yalesi sinkimbinkimbi inezindawo ezihlukahlukene ezahlukahlukene: "Flower World", "Village Tropical", amachibi anegama elihle "uLwandle LwaseNingizimu" futhi engenalutho oluncane - "Lagoon Bali." Kukhona nemifula eminingi, amabhishi asolwandle anezizathu zezemidlalo, i-jacuzzi kanye Ukukhangwa okuthakazelisayo kakhulu eJalimane (ukuphakama 25 m).
Noma ubani ohlala ehoradesi elinjalo elihle eliyipharadesi kubonakala sengathi usesesimweni esihle sezinkanyezi. Futhi itholakala kwenye indawo enhliziyweni yeYurophu.
Ngingathanda ukuphawula (ngokuziqhenya) ukuthi ngo-2015 i-aquapark enkulu kunazo zonke e-Yurophu, "i-Golden Bay" yanikezwa umklomelo ohlonishwayo wezwe "i-Golden Pony" ngokudala isimo esimangalisayo esingenakulibaleka epaki kubo bonke ubudala, isevisi ezingeni eliphakeme kakhulu Futhi ngenxa yobuhle obuhle bemifino yakhe.
Kubalandeli bokuphumula kwe-adrenaline nokuthula, imibhangqwana kanye nemikhaya emikhulu kukhona ukukhetha kwamapaki amanzi okuphumula nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
I-tsunami enkulu kakhulu eminyakeni eyishumi edlule emhlabeni
Albert Bandura. Ukholo indoda
Iphaneli ngokokuhlobisa ingaphakathi. OSB ngokokuhlobisa Ingaphakathi: ukufakwa, eziyingozi, ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Izincomo okukhetha nezilimo eziyizigaxa kwesokudla. Amazambane, harmonica kanye nezinye izitsha
Tour "Bulgaria Golden Esihlabathini" - a ithala zempilo futhi aziphumulele.